कतै यस्तो गल्ती त गर्दैहुनुहुन्न ? यस्ता गल्तीले बनाउँछ तपाईंको स्मरण शक्ति कमजोर | Samajik Khabar
Home अन्य कतै यस्तो गल्ती त गर्दैहुनुहुन्न ? यस्ता गल्तीले बनाउँछ तपाईंको स्मरण शक्ति...
कतै यस्तो गल्ती त गर्दैहुनुहुन्न ? यस्ता गल्तीले बनाउँछ तपाईंको स्मरण शक्ति कमजोर
मानिसको उमेर वृद्धिसँगै स्मरण शक्तिमा समेत कमी आउने गर्दछ । यसलाई सामान्य मानिन्छ । तर आजकल कतिपय युवा उमेरकै मानिसको स्मरणशक्ति कमजोर हुने गरको छ । यसको पछाडि भने धेरै कारणहरु रहने गरेका छन् ।
आजकल मुख्यतयाः दैनिक जीवनयापनका क्रममा मानिसबाट गरिने गलत बानिले मानिसको मष्तिकलाई कमजोर बनाउने गर्छ ।
जसको कारण धेरै मानिस छिट्टै विर्सने, देखेको भेटेको वा पढेको कुरा सम्झन नसक्ने लगायतका समस्याबाट गुज्रिन गरेका छन् । युवा अवस्थामा नै मानिसको स्मरणशक्ति कमजोर पार्ने केही गलत बानिहरु यस्ता छन्:
१. खानामा अनियमितता
कतिपय मानिस कार्य व्यस्तताका कारण खाना समयमा नखाने, बजारमा पाइएको जे पनि खाने गर्दछन् । यसले शरीरसंगै मष्तिकलाई समेत कमजोर बनाउने गर्दछ । बिहान अबेरसम्म खाली पेट बस्दा मानिसको मष्तिकले काम गर्न सक्दैन र एकाएक अत्याधिक खाँदा मष्तिकमा उल्झन उत्पन्न हुन्छ । जसले गर्दा मानिसको स्मरणशक्तिमा कमी आउँछ ।
२. धुम्रपानको लत
आजकल धेरै युवा धुम्रपान गर्दछन् । जो स्वास्थका लागि हानिकारक छ । यसले मानिसमा रोग भित्र्याउने र आयु घटाउने मात्र होइन मष्तिकको स्मरण शक्तिलाई समेत कमजोर पार्ने गर्दछ । धुम्रपानले मस्तिष्कको संवेदनशील भाग कर्टेक्सलाई सीधा असर गर्छ जसका कारण स्मरण शक्ति बिस्तारै गुम्न पुग्दछ ।
३. गलत जीवनशैली
प्रविधिको विकाससंगै आजकल धेरै मानिसको जिवनशैली परीवर्तन भएको छ । राति सबेरै सुत्ने मानिसहरु आजकल राति अबेरसम्म मोवाइल, ल्यापटप वा टेलिभिजनमा बिताउने गर्दछन् । राति अबेरसम्म नसुत्ने, शारीरीक व्यायाम नगर्ने लगायतका गलत जिवनशैलीले मानिसको मष्तिकमा असर पार्दछ र स्मरणशक्तिमा कमी आउने गर्दछ ।
४. पानी पिउने बानीमा कमी
धेरै मानिसहरुले शरीरलाई चाहिनेभन्दा कम पानी पिउने गर्दछन् । तर प्रसस्त पानी पिउने मानिसको मष्तिकले पानी नपिउनेको मानिसको भन्दा बढी स्मरण राख्न सक्छ । त्यसैले यदि तपाईँ कतै लामो दूरिको यात्रा वा लामो समयका लागी कुनै स्थानमा जादैं हुनुहुन्छ भने साथमा अनिवार्य पानी बोक्नुहोस् । यसले तपाईंको दिमागलाई ताजा बनाइ महत्वपूर्ण कुरा बिर्सनबाट जोगाउँछ ।
५. अल्छी स्वभाव
कतिपय मानिसमा काम गर्न अल्छी मान्दछन् । यस्ता अल्छेहरुको मष्तिक कम रचनात्मक हुनुका साथै कमजोर हुने गर्दछ । किनकी उनीहरु आफ्नो मष्तिकको प्रयोग कम गर्दछन् । मानिसले जति धेरै काममा आफूलाई ब्यस्त राख्दछ उनिहरुको मष्तिक पनि त्यति नै रचनात्मक र सिर्जनशील बन्छ ।
६. अत्यधिक तनाव
भनिरहनु पर्दैन मानिसको शरीरका लागी तनाव शत्रु झै हो । यसैले मानिसलाई कुनै रचनात्मक काम गर्नबाट बन्देज गर्दछ । सधैँ तनाव लिइरहने मानिसको दिमागमा यसले नराम्रो असर पार्दछ । र जब मानिस तनावमा हुन्छ यसले मानिसको स्मरणशक्तिमा कमी ल्याउने गर्दछ ।
७. ईयरफोनको प्रयोग
हामीले शहर वा गाउँ सबैतिर आजकल धेरै मानिसलाई कानमा ईयरफोन लगाएर श्रब्य सामाग्री सुनिरहेको पाउँछौ । तर लामो समयसम्म ईयरफोनको प्रयोग गर्ने मानिसको कान सहित मष्तिकका तन्तुमा पनि असर पर्ने गर्दछ । यदि कोही मानिस लामो समयसम्म ईयरफोनको प्रयोग गर्छ उसको स्मरणशक्तिमा कमी आउने गर्दछ ।
प्रत्येक वयस्क मानिस दैनिक ७ देखि ८ घण्टा सम्म सुत्न आवश्यक छ । यसले मानिसलाई स्वस्थ्य र स्र्फुत राख्न राम्रो योगदान गर्दछ । तर पर्याप्न निन्द्राको फाइदा यतिमात्रमा सिमित छैन, यसले मष्तिकलाई समेत स्वस्थ राख्दछ । अन्यथा मष्तिकमा विभिन्न भागमा असर पार्ने र सम्झना शक्तिमा कमी आउने गर्दछ ।
धेरै भिडभाड, होहल्ला वा दिनभर थकान महशुस हुने काममा ब्यस्त हुने मानिस केहीबेर एकान्त बस्न खोज्नु स्वभाविक हो । तर यदि कोहि मानिस दिनहुँजसो एकान्त बस्न खोज्छ भने यसले पनि मानिसको स्मरणशक्तिमा कमी ल्याउने गर्दछ ।
Previous articleकोठा भित्र कोइला बालेर सुत्दा निसासिएर श्रीमतीको निधन, श्रीमान् र छोरी आइसीयूमा
Next articleनेप्से परिसूचक ५० अंकभन्दा धेरैले बढ्याे